भित्ता र छानो बिनाको विश्वकै यो अनौठो होटल, जहाँ एक रात बिताएकै यति धेरै तिर्नुपर्छ ! Canada Nepal
काठमाडौं । हामिले धेरै खालका होटलहरु देखेका छौं । सुविधासम्पन्न होटलहरुमा बसेको र खाएको पनि धेरै मूल्य तिर्नुपर्छ भने सामान्य होटलमा खाएको त्यही अनुसार मूल्य पर्ने गर्छ ।
खासमा होटल सुविधायुक्त भएमा धेरै महँगो पर्छ । तर यस्तो अनौठो होटल पनि छ, जहाँको बारेमा जान्दा जोकोही अचम्म पर्छ । विश्वमा यस्तो होटल पनि छ, जुनमा छानो र भित्ताहरु पनि छैन ।
यो अनौठो र चर्चित होटल स्विजरल्याण्डमा रहेको छ । खुल्ला आकाशमुनि रहेको यस होटलको नाम नल स्टर्न होटेल हो । उक्त होटलका बेडहरु संरचना हुन् । यो होटलमा बाथरुमको पनि छैन ।
स्विजरल्याण्डका दुईजना कलाकार फ्रेंक र रिकलिनले बनाएको यो होटल एउटा डाँडोको टुप्पोमा रहेको छ । यी दुई कलाकारले बनाएको यो होटल चर्चामा आएपछि पर्यटक पनि आउन थाले । त्यहाँ एक रातका लागि अढाई सय डलर खर्च गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
आषाढ २५, २०७७ बिहिवार १६:०६:०० बजे : प्रकाशित
यस्तो अनौठो ढुङ्गाले यी मानिसको भाग्य नै चम्काइदियो, रातारात बने करोडपति
एजेन्सी - मानिसहरुको भाग्य कुन बेला चम्किन्छ, थाहा नै हुँदैन । कुनै मानिस अहिले गरिब छ भने भाग्य चम्किएमा धनी पनि हुन सक्छ ।
यस्तै एक व्यक्तिको पनि भाग्य चम्किएको छ । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला ? तर एक व्यक्ति एक्कासी रातारात करोडपति बनेका छन् । रातारात करोडपति बनेका ती व्यक्ति तान्जेनियका हुन् ।
अचम्म मान्नु होला ? तर स्यानीनियू लाइजर नामका ती व्यक्ति ढुङ्गाबाटै रातारात करोडपति बने । उनले माटो खन्ने क्रममा एक ठूलो तन्जानाइट ढुङ्गा फेला पारे । उनले भेटेको उक्त पत्थर सबैभन्दा दुर्लभ रहेको बताइएको छ ।
दुर्लभ पत्थर भएको खोजपछि उनीलाई ३४ लाख डलर मिलेको बताइएको छ । उनले एक्कासी करोडौ रकम प्राप्त गर्दा दंग थिए । उक्त दुर्लभ पत्थरको पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको थियो । त्यस्तै तस्बिर पनि भाइरल बनेको थियो ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार २२:२७:३७ बजे : प्रकाशित
अनौठो स्याल, जसले १ सय भन्दा बढी जुत्ता चप्पल चोर्‍यो
एजेन्सी - हामिलाई थाहा नै छ चोरी गर्ने काम मानिसहरुले गर्छन् । घर आँगनमा हामिले जुत्ता चप्पल छाडेमा हराउदा चोरी भएको ठान्छौ । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला, तर एक स्यालले जुत्ता र चप्पल चोरेको छ ।
जर्मनीमा एक स्यालले जुत्ता र चप्पल चोर्ने गर्छ । जेलेन्ड्रोफका मानिसहरुले बगैंचा र आँगनमा राखेका चप्पल र स्पोर्टस सुज एकाएक हराउन थाले । दिनदिनै जुत्ता र चप्पल हराउदा जेलेन्ड्रोफका मानिस दिक्क भएका थिए ।
तर एक दिन त्यहाँका स्थानीयले स्यालले मुखमा चप्पल च्यापेर हिडिरहेको देखे । दैनिक अखवार टाजेस्सपिजेलका अनुसार उक्त स्यालले मुखमा एकजोर निलो रंगको चप्पल च्यापेको स्थानीयले देखेका थिए । स्यालको पछि जाँदा लुकाएर राखेको १ सय जोर भन्दा बढी जुत्ता भेटियो । यस घटनाका बारेमा टाजेस्सपिजेलका सम्पादक फेलिक्स ह्याकनब्रचले पुष्टि गरेका छन् ।
श्रावण २१, २०७७ बुधवार १५:३९:०० बजे : प्रकाशित
यी व्यक्तिले यसरी आकाशमा उडाए बाथटब, भिडियोमा हेर्नुहोस्
एजेन्सी - हामिले बाथटबलाई नुहाउनको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौ । बाथटबको नुहाउन बाहेक अरु कुनै प्रयोग गर्ने गर्दैनौ । तर जर्मनीमा एक घरका दाजुभाईले बाथटबलाई आकाशमा उडाएका छन् ।
मिकेनबेकर दाजुभाइले ड्रोन प्रविधि उपयोग गरेर बाथटब उडाएका हुन् । भिडियोमा देखाए जस्तै योहानेस र फिलिप मिकेनबेकरले ड्रोन प्रविधि उपयोग गरेर बाथटब उडाएका हुन् ।
उनीहरुले उक्त उड्ने बाथटप २ महिना लगाएर बनाएको बताइएको छ । उक्त बाथटब भुइँबाट १०० फीट माथिसम्म मात्र उड्न सक्ने बताइएको छ ।
श्रावण २०, २०७७ मंगलवार १६:१५:०० बजे : प्रकाशित
अनौठो घटना, आठ महिनासम्म जेलमा बसेर रिहा भयो कुखुरा
एजेन्सी - तपाईले गलत काम गरेका मानिसहरुलाई जेलमा राखेको थाहा पाउनु भएको छ होला ? के तपाइले कुखुरालाई जेलमा राखेको सुन्नु भएको छ ? तपाइलाई पत्यार नलाग्ला तर एक कुखुरा आठ महिना जेल बस्न परेको छ ।
पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको घोटकी जिल्लामा रहेको एक कुखुराले त्यहाको स्थानीय अदालतले ६ महिनाको जेलका राखेको हो । ८ महिना जेलमा बसेपछि मात्र कुखरालाई रिहा गरियो ।
भाले जुधाईको खेल भइरहेको ठाउँमा प्रहरीले छापामारीको क्रममा मानिस सहित कुखुरालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त कुखुरालाई कोही मेरो भन्दै नआएपछि जेलमै राखियो ।
स्थानीय बासिन्दा जफर मिरानीले सिभिल जजको अदालतमा प्रहरी हिरासतमा रहेको आफ्नो कुखुरालाई मुक्त गर्न अदालतमा मुद्दा हालिन् । त्यसपछि कुखुरा उनको रहेको पत्ता लागेपछि कुखुरा उनलाई नै फिर्ता गरियो ।
श्रावण २०, २०७७ मंगलवार १४:३८:०० बजे : प्रकाशित
यी अनौठा युवक, जसलाई ११ हजार भोल्टको करेन्टले पनि छुदैन
काठमाडौं । करेन्ट भन्ने बित्तिकै हामि टाढा भाग्ने गर्छौ । करेन्ट लागेर मानिसहरुको ज्यान गएको पनि हामिले सुन्दै आइरहेका छौ । हामिलाई थाहा नै छ, करेन्टको सानो झट्काले पनि मान्छेको जिउ लल्याक लुलुक पारिदिन्छ । तर भारतमा यस्ता मानिस पनि छन् जसलाई करेन्टले कुनै असर गर्दैन ।
भारतको हरियाणस्थित सोनीपतका एक युवकले ठुलो भोल्टको करेन्टसँग पनि सामना गर्न सक्छन् । हरियाणस्थित सोनीपतमा बस्ने दीपक जांगडा साच्चै नै अनौठा युवक छन् । २७ सय भोल्टको करेन्टले मानिसको ज्यान लिन्छ तर दीपकलाई ११ हजार भोल्टको करेन्ट लगाए पनि असर गर्दैन ।
उनले आफ्नो शरिरमा करेन्ट लाग्दैन भन्ने कुरा केही वर्षअगाडि नै थाहा पाएका थिए । उनको घरमा हिटर बिग्रीयो । घरमा हिटर बिग्रेपछि उनले बनाउन प्रयास गरे । झुक्कीएर हातले नांगो तार छुन पुगे । तर उनलाई केही भएन ।
उनी त्यस बेला आफै अचम्म परे । उनले आफुमा भएको यो चमत्कार भगवानले दिएको बताउने गर्छन् । उनको शरिरमा के छ भनेर परिक्षण पनि गरियो । तर उनको शरिरमा कुनै समस्या देखिएन ।
श्रावण १९, २०७७ सोमवार १५:४०:०० बजे : प्रकाशित